Oromo News 06.28.21 | KWIT
Program yaali Nebraska July 31th kan sutu yoo tau guyyaa dhuma yaali July 18th akka taes himani jirani.
Ricketts akka jedheti virus kan hir’isuu akka homaa gochuu hin dandeenefi namni hospitala yaalamu hir’isuu yaalame akka jiru himan.
July dhuma irrati seera fediral haquu isaatin kumaataman warra lakkaahaman warra kiraa guuru ariamuun ni danda’aan jedhuun sodaa akka qaban himan.
Nebraska December keessa pakeji qarqaarsa coronavirus kan godhame manneen kiraa baaye fi kaffallii takka takka akka godhamuuf gara $200million akka kenname himan. Abukaaton seera kan qarqaarsa gama isaati namni qaee ufii irraa buqauunsakan baayate akka tae mullisa garuu maal akka tae hin beekamne.
Warri daddafiin qarqaarsa yoo kan argachuu danda’anii qaee ufii irraa buqauun akka hir’achuu danda’an.
Deparmantin mana fayyaa Iowa namni amati akka state guututi hospitaala jiran nama 67 akka tae himan, Iowa keessati namni haarawa qabame 43 dha.Woodbury County keessati ammo torbaan tokko keessati namni qabame nama 7 dha. Qorannoo bultii 14 keessati godhame 1% takka yoo tau, qixxeen state ammoo 2 % dha.